Fish Hunter – KoTaNgar 3D Version 1.0.13 – Apkzone.info
Fish Hunter – KoTaNgar 3D Version 1.0.13
4.7	(1,237)Casual, Gamesby SQUARGAME
Description of Fish Hunter - KoTaNgar 3D
ပင်လယ်ခုနှစ်ခုမှာ အမဲလိုက်တဲ့အခါအံ့သြဖွယ်ရတနာတွေက စောင့်ဆိုင်းနေပါပြီ။ အစွမ်းထက်သေနတ်တွေကို ရယူပြီးဆုလက်ဆောင်ရယူဖို့ ကျောက်မျက်များ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းတွေကိုစုဆောင်းလိုက်ပါ။ ပင်လယ်ခုနှစ်စင်းရဲ့ ရေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အန္တရာယ်ရှိဘောစ့်တွေ သို့မဟုတ် ကြောက်မက်ဖွယ် မွန်းစတားတွေကို သတိထားလိုက်ပါဦး!အကောင်းဆုံး သမုဒ္ဒရာရတနာကို ရှာဖွေဖို့ အစွမ်းအထက်ဆုံး ကိုတံငါကဘယ်သူဖြစ်မလဲ? အမြန်ဆုံးသေနတ်ပိုင်ရှင်လား?အစွမ်းအထက်ဆုံးသေနတ်ပိုင်ရှင်လား? ကိုယ် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သေနတ်အမျိုးအစားနှင့် ကိုယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ကျောက်မျက်တွေပေါ်မှာအားလုံးက မူတည်နေပါတယ်။
– လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနဲ့အတူ အစွမ်းထက်သေနတ်တွေကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး စုဆောင်းလိုက်ပါ
– ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အမဲလိုက်နိုင်စေဖို့ ကိုယ့်သေနတ်ကို တိုးမြှင့်ပြီးငါးဖမ်းကိရိယာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုလိုက်ပါ
– နေ့စဉ်အမဲလိုက်ဂိမ်းအကြီးစားအတွက် ဘောစ့်တွေက နေရာတိုင်းမှာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်
– ဆုလက်ဆောင်အမျိုးမျိုးကို လဲလှယ်ဖို့ အစိတ်အပိုင်းများကိုစုဆောင်းပါ
– ပိုကြီးတဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေအတွက် ထိပ်တန်းအနိုင်ရသူဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မယ့် ငါးအမဲလိုက်ပြိုင်ပွဲကွင်းမှာပါဝင်လိုက်ပါ
– တိုးမြှင့် 3D ဂရက်ဖစ်တွေက အမဲလိုက်တဲ့အခါ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေမှာပါ
– အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ! နေ့စဉ်ဆုလက်ဆောင်တွေ ရရှိဖို့ VIP အဆင့်ကိုရယူလိုက်ပါ
– ပင်လယ်ခုနှစ်စင်းမှာ အစွမ်းအထက်ဆုံးသေနတ်တွေကို အဆင့်မြှင့်နိုင်တဲ့ပထမဆုံး ငါးပစ်ဂိမ်း
– အကြီးမားဆုံး ဘောစ့်အမျိုးမျိုးနှင့် ဘောစ့်အရေအတွက်များစွာ
– ပြိုင်ပွဲကွင်းကို Level အားလုံးမှာရှိနေတဲ့ ကစားသမားအားလုံးအတွက်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ ပင်လယ်ခုနှစ်စင်းရဲ့ ထိပ်တန်းဟီးရိုးတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးရရှိဖို့ ပြိုင်ပွဲကွင်းမှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
အခုပဲ MyFish 3D ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်ပါ! ပင်လယ်ခုနှစ်စင်းမှာအကောင်းဆုံးဘောစ့်တွေကို အမဲလိုက်လိုက်ပါ! များများ ကစားလေဆုလက်ဆောင်တွေ များများ ရနိုင်လေပါပဲ!When two sea hunting isan amazing treasure waiting. Get powerful guns gift collect gems orprocure components. Two sea water inside or dangerous Hockey Poststerrible မှနျးစတား careful! Best Jewelry to find the most powerfulocean ကိုတံငါ ဘယျသူဖွဈမလဲ? Fastest gun owner? The most powerfulgun owners? I built using the type of gun and gems all depends onyou.
– actions withapowerful gun to collect upgraded
Hunting can more easily improve your gun to open and useavarietyof fishing gear
– Daily hunting big game can appear anywhere in Hockey Posts
– to collect the parts toavariety of gift exchange
–alarger gift to becomeatop winner for the rights available inthe next five hunting contest creator improper
Event-enhanced 3D Hunting will make you more attractive
– creator right now! Get the daily VIP level to receive gifts
The two sea – the most powerful gun in the first five games thatcan be upgraded
The greatest number of ships needed and Hockey Posts
All-tournament brackets Level offers open to all existing players.Sea to obtain the rights to become one of the top two herocompetition include improper.
Download MyFish 3D now! The two best of the sea Football Postshunting! The more players you can get plenty of gifts!
App Information of Fish Hunter - KoTaNgar 3D
App Name Fish Hunter - KoTaNgar 3D
Package Name com.mygame.fishhunter3d
Rating 4.7	( 1,237 )
Tags: Fish Hunter - KoTaNgar 3D, Fish Hunter - KoTaNgar 3D 1.0.13, Fish Hunter - KoTaNgar 3D 1.0.13 APK, free download Fish Hunter - KoTaNgar 3D 1.0.13, free download Fish Hunter - KoTaNgar 3D 1.0.13 APK
Related Posts of Fish Hunter - KoTaNgar 3D
Game Asah Otak21.1.7
Candy's Family Life 1.0
Jackpotmania - Vegas Slots Casino 1.0.3